यूरिक एसिड के हो ? यसबाट बच्ने कसरी ?
कोशी अनलाइन आइतबार, २२ भदौ, २०७६ मा प्रकाशित
नेपालीहरूमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या बढ्दै जानुका अनेक कारणहरू मध्ये सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कारण हो खानपान तथा खराव जीवनशैली । दैनिक जीवनशैली तथा खानपानमा बेवास्ता गरेका कारण लाग्ने धेरै रोगहरू मध्ये यूरिक एसिड अर्थात् बाथ पनि एक हो । अर्थोन्युरो हेल्थ केयरका डा। सुनिल पौडेलका अनुसार यूरिक एसिडको रोग नेपालीहरूमा देखिने एक आम समस्या बन्दै आएको छ ।
यूरिक एसिड मुख्य गरी २ वटा कारणले बढ्ने गर्छ । पहिलो कारण खाना र जीवनशैलीकै कारण र दोस्रो बंशाणुगत कारणले प्राय युरिक एसिडको रोग बढेको हुन्छ ।
परिवारमा एक जनालाई हुँदा अन्यलाई हुने सम्भावना पनि हुन सक्छ । यो सरुवा रोग भने होइन । एक परिवारमा एकै खाले जीवनशैली तथा खानपिनको बानी हुने भएकाले एक जनालाई हुदा अर्कोलाई समेत हुन सक्ने सम्भावना हो ।
हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. कपिलमणि केसीका अनुसार सबैको शरीरमा युरिक एसिड हुन्छ । युरिक एसिडको मात्रा ३ देखि ७ मिलिग्राम पर डेसिलिटर भएको अवस्थालाई सामान्य मानिन्छ । जब युरिक एसिडको मात्रा ७ भन्दा बढी हुन्छ, यस्तो अवस्थालाई युरिक एसिड बढेको भनिन्छ ।
सामान्य भाषामा मानव शरीरमा प्युरिन नामको प्रोटिन टुक्रिएर युरिक एसिड बन्ने गर्छ र उक्त केमिकल मुख्य रूपमा पिसाब र दिसाबाट बाहिर निस्कन्छ ।
युरिक एसिड भनेको खानामा पाइने प्युरिन भन्ने एउटा तत्त्व पचेर बाँकी रहने इन्ड प्रोडक्ट हो । प्युरिन भन्ने तत्त्व जे जे मा उच्च हुन्छ, त्यसले युरिक एसिड बढाउने गरेको हुन्छ । मिर्गौलाले युरिक एसिडलाई छान्ने काम गर्छ ।
मिर्गौलाले युरिक एसिड राम्ररी फाल्न नसक्दा वा शरीरले फाल्न सक्ने क्षमता भन्दा बढी उत्पन्न हुदा युरिक एसिड बढ्नु त स्वाभाविक नै हो तर, कहिले काँहि उपवास वा तिव्र रुपमा तौल घटाउने चाहना, शारीरिक श्रम नगर्ने, धेरै प्रोटिनयुक्त खानेकुरा, शरीरमा इण्डोक्राइन रोग, क्यान्सर, केमोथेरापी, एनिमिया, दीर्घकालीन रक्सीको सेवन, मधुमेह, रक्तचाप, मोटोपन, विभिन्न औषधिको सेवन गर्ने मानिसमा युरिक एसिड बढ्ने सम्भावना बढी हुन्छ ।
सामान्य रूपमा शरीरका जोर्नीहरू दुख्ने, झमझम गर्ने, हातखुट्टाको मासुमा पिडा हुने, जोर्नीहरू कक्रक्क हुने, तिघ्राको मासु फत्रक्क गल्ने आदी समस्या युरिक एसिड बढेका लक्षण होइनन् । शरीरमा केही प्रकारको पिडा पहिले बाटै छ वा थियो भने बढेको यूरिक एसिडले उक्त दुखाइलाई झनै बढाउने गर्दछ ।
राति सुतेको मान्छे बिहान उठ्दा हातका औंला, खुट्टाको औंलाको जोर्नी सुन्निने तथा दुखाईको महसुस हुन्छ भने युरिक एसिड भएको हुनसक्छ ।किनभने यो रोगले शरीरको सानो सानो हाडजोर्नीहरुमा असर पुर्याउने गर्छ । पछि भविष्यमा गएर यसले जार्नीको दुखाई, वाथ रोग, हड्डीमा गाठो, मृगौलामा पथरी तथा मृगौला बिग्रिने लगायतको समस्या निम्त्याउने गर्छ ।
रोगको मात्रा बढ्दै जाँदा औंला बाङ्गिने, नाडी लगायत शरीरका अरू मुख्य जोर्नी पनि बिग्रन गई अपाङ्ग हुने अवस्था आउन सक्छ । युरिक एसिडलाई नियन्त्रण गर्नका लागि सुरुमा रोगको पहिचान गर्न आवश्यक छ । यूरिक एसिड बढेको छ भने सबैभन्दा पहिला त खाना बारेर शरिरको तौल बढी छ भने नियन्त्रण गर्नु पर्छ । बढी तौल भएको शरिरमा युरिक एसिड थुप्रिएर रगतमा प्रसार हुन्छ । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष के खान हुने र के खान नहुने भन्ने बारेमा हुने गर्छ । मासुजन्य खाद्यपदार्थमा प्युरिन रहेको हुन्छ, जसको सेवनले युरिक एसिड बढाउने गर्दा मासु, कलेजो, किड्नी, मुटु खानु कम गर्नु पर्छ ।
चुरोट, खैनी, रक्सी, बियरजस्ता पदार्थको सेवन, कोक, फ्यान्टा, स्प्राइट, पेप्सी, मिरिण्डाजस्ता सफ्ट ड्रिँक, तरकारीमा सिमी, तोरीको साग, पालुंगोको साग, र जंकफुडमा आइसक्रिम, पाउरोटी, केक आदीको सेवनले पनि शरीरमा युरिक एसिड निम्त्याउन सक्छ । तेलमा तारेको, धेरै मसला भएको खानेकुराहरु कम खानु पर्छ ।
यस्ता खानेकुरामा भएको तेल र फ्याट रेनसिडमा परिणत भएर शरिरमा भएको भिटामिन ‘ई’ नष्ट गरी युरिक एसिड उत्पन्न हुन्छ । मृगौलाको राम्रो संग संचालन नहुने हुँदा युरिक एसिडको मात्रा बढ्ने भएकोले दैनिक कम्तिमा पनि १० गिलास पानी पिउनु आवश्यक देखिन्छ ।
केरा, आलु, दूध, दही, स्ट्रबेरी, कागती आदी तथा क्याल्सियमयुक्त खानाको सेवन बढाउनुपर्छ । यसका साथै शारीरिक व्यायाम गरेर मानसिक तनावलाई कम गर्नु पर्छ । अन्डा एउटा प्रोटिनयुक्त खानेकुरा भए पनि युरिक एसिड बढाउँदैन । सतर्कता अपनाउदा पनि शरीरको युरिक एसिड बढेमा, शरीरमा अत्यन्त पिडा भएमा चिकित्सकको परामर्श लिएर औषधिको सेवन नै गर्नु पर्छ ।
मर्ने कसैलाई रहर हुँदैन
दुर्घटना गराउने सम्पर्कविहीन, तीन महिनादेखि अस्पतालमा भोकभोकै युवक
गायक अरुण थापाको भूमिकामा प्रदीप नसुहाउने भन्दै निर्माणअघि फिल्म विवादमा
पछिल्लो २४ घण्टामा थप १०८ जनामा संक्रमण पुष्टि
नेपालमा कोरोना जित्नेको संख्या आठ हजार नजिक
कोरियोग्राफर सरोज खानको बायोपिक फिल्म बन्ने